I-Sustainable Transportation Research Group yase-UKZN igxile ezisombululweni ngezindaba zezokuthutha zezwe nezomhlaba jikelele.
Umsebenzi we-Sustainable Transportation Research Group (i-STRg) kweZobunjiniyela beZokwakha e- UKZN ubhekiwe ephepheni i-Outlook legatsha eliseThekwini le-South African Institution of Civil Engineering.
Loludaba lubheke umsebenzi wethimba ngezisombululo ezisebenzayo ezindabeni zokuthutha ezweni nasemhlabeni jikelele.
I-STRg esungulwe wuMholi weZifundo uSolwazi Mohamed Mostafa, uSolwazi Dillip Das, uSolwazi Johnnie Ben-Edigbe noMnu Senzo Shange, yasungelwa ngemva kokuthi Isikole seZobuNjiniyela sizama ukuqinisa izifundo zaso nocwaningo lwaso ngokuphucula ingqalasizinda, ukuphucula indawo yokusebenza nokuqeqesha abasebenzi emikhakheni emqoka njengamanzi, izakhiwo nezokuthutha nokunye.
I-STRg ihlanganisa ongoti kwezokuthutha ukuthuthukisa ucwaningo ngekusasa lezokuthutha ngomgwaqo ukubamba iqhaza ekubhekaneni nezinselelo zomhlaba wonke okwenziwa wukuhamba kwabantu nezimpahla, okubalwa ukucekeleka kwemvelo, uguquguquko lwesimo sezulu nokunye.
Ukuphucula izinto ocwaningweni nasekufundiseni ngezokuthutha e-UKZN kusho ukuthi abafundi abenza izifundo zokuqala nabaqhuba izifundo baboniswa izinto ezihlukene emkhakheni wezokuthutha njengobunjiniyela kwezokulawula izinto ezihambayo, ukuhlela ezokuthutha nokudweba imigwaqo, ukwakha nokwenza ucwaningo olusha ngesihloko socwaningo, ucwaningo ngonyaka wokugcina nemisebenzi. Lelithimba linika abafundi abafunda ngokugcwele nabangafundi ngokugcwele amathuba okwenza amamastazi nezifundo zobudokotela kanti kumanje liphezu komkhankaso wokubeka usihlalo wocwaningo kwezokuthutha zangomuso.
Abacwaningi be-STRg benza ucwaningo ngezokuthutha zesimanje, izinto zemigwaqo zangomuso, izindlela zokuthutha umphakathi, ubunjiniyela bezokuphepha emgwaqweni, ukulawula izinto ezihambayo, ukuhlela unqenqema, izindlela zokuhlela unqenqema, ukuhlola ukuthi unqenqema luthatha isikhathi esingakanani nezindlela zokuthutha ezihlangene. Ukulungiselela lolucwaningo kuphuculwa igumbi lokwenza ucwaningo lwezokuthutha lase-UKZN okubalwa kukhona ukufaka izimpahla ezintsha.
‘Siphokophele ukusungula isizinda socwaningo lwezokuthutha e-UKZN ngokubheka izinkinga ezweni nasezindaweni ukuze siqhambuke nezisombululo ukuphucula ingqalasizinda yezokuthutha,’ kusho u-Mostafa. ‘Sisebenzisana nezimboni kanye nezikhungo zikahulumeni njengoba sikholelwa ukuthi ucwaningo kumele lubhekane nezidingo zemiphakathi yendawo ukuze zamukelwe emhlabeni jikelele.’
Emisebenzini yocwaningo ye-STRg kukhona izindlela ze-Applied Systems Analysis ocwaningweni lwamadolobha esimanje nokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuxhumana emazweni asathuthuka. Iyaziwa emabhukwini ocwaningo jikelele nasezingqungqutheleni.
‘Sizibona siphosa esivivaneni solwazi olusha, siqhamuka nemibono emisha yokuthuthukisa izinto nobuchwepheshe obuzokwenza ezokuthutha e-Afrika nasemhlabeni zibe yimpumelelo,’ kusho u-Mostafa.
Ithimba ligxile ekuhleleni ezinye izinto ezindleleni zokuthutha njengamagqunyana emigwaqweni nokwenziwa kwezibani zomgwaqo ukuphucula ukuphepha emgwaqweni.
‘Sizama ukuphosa esivivaneni ukuxazulula izinkinga ezinzima zezokuthutha ngocwaningo lwethu nekhono lokuxazulula izinkinga ukuze siphile endaweni okuhlalekayo kuyona,’ kusho u-Das.
Umsebenzi we-STRg uholele ekuhlonishweni kwabacwaningi bayo emkhakheni A we-South African National Roads, eyeseke imisebenzi emine eyenziwa yiSTRg namanye amanyuvesi, izikhungo zocwaningo nezinkampani. Lelithimba linobudlelwano namanye amanyuvesi e-United Kingdom naseMelika.
IDini neNhloko yeSikole sobuNjiniyela uSolwazi Glen Bright ubalule ukukleliswa kwe-UKZN ezingeni lomhlaba lapho ibalwa khona emanyuvesi avelele asesicongweni angama-2.5% emhlabeni, okufakazela ukuzibophezela ezingeni eliphezulu, nezicucu zobunjiniyela ezihlonishwa emhlabeni okwenza inyuvesi ibe negalelo elimqoka nelibonakalayo kuyo yonke imiphakathi.